Ch 11 Matiu – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Matiu / Ch 11 Matiu
11:1 Ma ọ mere na, Mgbe Jizọs dechara ịkụziri ya na iri na abụọ na-eso ụzọ, o we si na e iji kụziere na-ekwusa ozi ọma n'obodo nile ha.
11:2 Now when John had heard, in prison, about the works of Christ, sending two of his disciples, o wee sị ya,
11:3 "Ọ bụ gị ọ bụ onye na-abịa, or should we expect another?"
11:4 Na Jizọs, na-aza, sị ha: "Gaanụ kọọrọ Jọn ihe unu nụrụ na hụrụ.
11:5 The blind see, ndị ngwọrọ na-eje ije, ndị ekpenta dị ọcha, ndi nti chiri nānu, ndị nwụrụ anwụ ịrị elu ọzọ, ndị ogbenye na-ọkọkwọrọ.
11:7 Mgbe ahụ, after they departed, Jesus began to speak to the crowds about John: “What did you go out to the desert to see? A reed shaken by the wind?
11:8 So what did you go out to see? A man in soft garments? Le, those who are clothed in soft garments are in the houses of kings.
11:9 Then what did you go out to see? A prophet? Ee, Ana m agwa gị, and more than a prophet.
11:10 For this is he, of whom it is written: Le, M zitere m Angel n'ihu gị, who shall prepare your way before you.’
11:11 Amen m asị unu, n'etiti ndị ụmụ nwaanyị mụrụ, e bilitere dịghị onye dị ukwuu karịa Jọn Baptist. Ma ọ dịghị ihe ọzọ na ala-eze nke elu-igwe ka ya uku.
11:12 Ma malite n'ụbọchị Jọn Baptist, ọbụna ruo ugbu a, alaeze eluigwe nke diri ime ihe ike, na-eme ihe ike na-ebu ya.
11:13 N'ihi na ndị amụma niile na iwu amuma, ọbụna ruo mgbe John.
11:14 Ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịnabata ya, ọ bụ ya bụ Elijah, onye bụ na-abịa.
11:15 Onye ọ bụla nke nwere nti inu, ya nụrụ.
11:16 Ma ka ihe m ga-eji tụnyere ọgbọ a? Ọ bụ dị ka ụmụ nọ ọdụ n'ọma ahịa,
11:17 onye, akpọ ha òkù iji ndị enyi ha, na-ekwu: 'Anyị na-egwuri music n'ihi na ị, na-abụghị gị na-agba egwu. Anyị kwara arịrị, na-abụghị gị na-eru uju. '
11:18 N'ihi na Jọn bịara, ọ na-eri ma ọ bụ mmanya; na ha na-ekwu, 'O nwere mmụọ ọjọọ.'
11:19 The Nwa nke mmadụ bịara na-eri, na-aṅụ; na ha na-ekwu, Le, otu nwoke na-eri voraciously na-aṅụ mmanya, a enyi ndị ọnaụtụ na ndị mmehie. 'Ma amamihe n'onye ezi omume site ụmụ ya. "
11:20 Mgbe ahụ, ọ malitere mba obodo dị ọtụtụ nke ọrụ ebube ya si di zuru, n'ihi na ha ka na-ama chegharịrị.
11:21 "Ahụhụ ga-adịrị gị, Korezin! Ahụhụ ga-adịrị gị, Betseida! N'ihi na ọ bụrụ na ọrụ ebube ndị ahụ e mere na ị nọ na-eme na Taya na Saịdọn, ha ga-echegharị ogologo oge gara aga na haircloth na ntụ.
11:22 Ma n'ezie, M asị unu, Taịa na Saịdọn ga-agbaghara ihe karịa gị, na ụbọchị ikpe.
11:23 Ma gị, Capernaum, ị ga-ebuli ya elu n'ụzọ nile heaven? Ị ga-ịgbada n'ụzọ nile Hell. N'ihi na ọ bụrụ na ọrụ ebube ndị ahụ e mere na ị nọ na-eme na Sọdọm, ikekwe ọ gānọgidewori, ọbụna ruo taa.
11:24 Ma n'ezie, M asị unu, na ala Sọdọm ga-agbaghara ihe karịa gị, na ụbọchị ikpe. "
11:25 N'oge ahụ, Jesus wee zaa, sị: "Ma m gị, Nna, Onyenwe eluigwe na ụwa, n'ihi na i zonahụwo ndị amamihe na ndị dị akọ na, ma kpugheere ha ka ha na ụmụntakịrị.
11:26 Ee, Nna, n'ihi na nke a ọ na-amasị tupu ị.
11:27 Ihe niile e n'aka m Nna m. Na ọ dịghị onye maara Ọkpara ahụ ma e wezụga Nna, ọ dịghịkwa onye ọ bụla maara Nna ma e wezụga Ọkpara, na ndị na onye Ọkpara ya chọrọ ikpughere ya.
11:28 Bịakwute m, unu niile ndị na oru na e anyịgbu, m ga-emekwa ka unu zuru.
11:29 Nyaranụ yok m ị, mụtakwanụ ihe n'aka m, n'ihi na abụ m dị umeala n'obi ma dị umeala n'obi nke obi; na ị ga-ahụ fọdụrụ n'ihi mkpụrụ obi unu.
11:30 N'ihi na yok m bụ ụtọ na m ibu arọ bụ ìhè. "